Waa maxay nolol maalmeedka takhaatiirta, umulisooyinka, dhakhaatiirta ilkaha, farmashiistaha, takhaatiirta jimicsiga jirka, kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo kalkaaliyayaasha? Maxaa daraasado ah oo aad u baahan tahay inaad sameyso si aad uga shaqeyso shaybaarka? Shaqooyinkee ayaan qaban karaa si aan u daryeelo dadka naafada ah?
Ujeedada koorsadan waa in la soo bandhigo adduunka caafimaadka, kala duwanaanta xirfadaheeda iyo tababarkeeda. Waad ku mahadsan tahay ka qayb qaadashada in ka badan 20 xirfadlayaal iyo macalimiin, wuxuu isku dayi doonaa inuu ka jawaabo su'aalahaaga ku saabsan xirfadaha iyo tababarka caafimaadka.
MOOC “Mihnaddayda Caafimaadka” waa qayb ka mid ah MOOC-yada dhammaystirka ah ee hanuuninta ee loo yaqaan ProjetSUP. Nuxurka lagu soo bandhigay koorsadan waxaa soo saaray kooxo waxbarid oo ka socda tacliinta sare oo ay iskaashanayaan Onisep. Markaa waxaad hubin kartaa in nuxurku yahay mid la isku halayn karo, oo ay abuureen khubaro ku xeel dheer arrimahaas.
MOOC MMS: Xirfaddayda Daryeelka Caafimaadka Diisambar 17, 2021Tranquillus
horeTababar ku saabsan waxbarashada sare